Ejikwala ihe iberiibe atụrụ ndụ. Ọtụtụ ihe a na-emepụtara ndị mmadụ ka ha jiri na-atụrụ ndụ taa na-eme ka agụụ mmekọ nwoke na nwaanyị na-agụ ha. Ma, olee ihe Baịbụl gwara anyị? Ọ sịrị: “Ka anyị sachapụ onwe anyị mmerụ niile nke anụ ahụ́ na nke mmụọ, wee mee ka ịdị nsọ anyị zuo oké n’egwu Chineke.” (2 Ndị Kọrịnt 7:1) Ejikwala ihe ọ bụla ga-eme ka mmekọ nwoke na nwaanyị gụwa gị na-atụrụ ndụ.